Home समाचार मजदुरी गरेर हुर्काएको छोरो त’स्करले मा’रेपछि उ’जाडियो आमा कलावतीको सपना
काठमाडौँ । गोविन्द बिक नौ वर्षका थिए जब उनका बुवा बि’ते । आमा कलावती बिकले तीन छोरा र एक छोरीलाई मजदुरी गरेर हुकाईन बढाइन । उनीहरु सुकुम्बासी परिवार थिए । सहारा केही थिएन । बुवा बि’तेपछि परिवारको पालनपोषणको अभिभारा आमा कलावतीको काँधमा आएको थियो । खेतीका लागि जमीन पनि थिएन ।
सम्पत्तीका नाममा एउटा ओत लाग्ने झुपडी मात्र थियो । त्यही झुपडीमा उनी हुर्किए । आमा कलावतीले अर्काको खेतमा काम गरिन, दाउरा बेचिन, मजदुरी गरिन । आफ्ना सन्तानलाई हुर्काउन उनले निकै हण्डर खानुपर्यो । धेरै अभाव झेलिन, पीडा भोगिन तर पनि छोराछोरीलाई पढाएर ठूलो मान्छे बनाउने उनको सपना थियो । दाईभाईले धेरै पढ्न रुचि देखाएनन् । दाई खेती किसानमा जुटे । कान्छो भाईले पनि एसएलएसी दिएपछि पढाई छोडे । दिदीको बिबाह भयो तर गोविन्दले भने पढाई छोडेनन ।
उनले पुनर्वासको क गाउँमा रहेको बागेश्वरीमा माविबाट एसएलसी पास गरे र थप पढाईका लागि उनकी आमा कलावतीले कैलाली बहुमुखी क्याम्पस भर्ना गरि दिईन उनलाई । धनगढी डेरा गरेर पढाउन सक्ने आर्थिक हैसियत भने थिएन तर पनि छोरालाई पढाएर ठूलो बनाउने सपना पुरा गर्न उनले रातदिन दु :ख गरेर मजदुरी गरिन । तीन वर्षअघि आमा कलावतीको सपना पुरा भयो ।
गोविन्दले नेपाल प्रहरीमा प्रहरी सहायक निरिक्षकमा नाम निकाल्न सफल भए । त्यो दिन कलावतीका लागि मात्र नभएर उनको समुदायकै लागि नै ठूलो खुशीको दिन थियो । दलित समुदायबाट असई हुने गोविन्द पहिलो युवा थिए । पढेर के हुन्छ र भनेर बीचमै पढाई छोड्ने दलित समुदायका विद्यार्थीहरुका लागि त उनी एक प्रेरणाको स्रोत नै भएका थिए । किनकी उनी आफ्नै अध्ययन र मिहिनेतले असई भएका थिए । उनको न पहूँच थियो, न त उनी कुनै राजनैतिक दलका कार्यकर्ता नै थिए । आमा कलावतीको छोरा ठूलो भएको हेर्ने सपना भने धेरै समय टिक्न सकेन ।
भदौ पहिलो साता धनगढी उपमहानगरपालिका – १२ जुगेडा स्थित प्रहरी चौकीको इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हालेका गोविन्द कार्तिक १ गते राति गस्तीको क्रममा निस्किएका बेला त’स्कर’हरुको ए म्बु समा परे । उनको बि’भ त्स ढं गले तस्क रह’रुले ह, *त्या’ ग’रे । यो घ ट्ना गोविन्द बिक’को मात्र ह, *त्या’ थिएन । आमा कलावतीको एउटा स पनाको पनि ह, ‘त्या’ भएको थि’यो र उनीसंगै आश्रित श्री’मती, सात र तीन वर्षीया छोरी, दाई, भाउजु, उनीहरुका तीन सन्तान, भाई र बुहारी समेत गरी परिवारका ११ जना सदस्यको आ’शा र भ’रोसाको पनि ह, ‘त्या’ भएको थि’यो । गोविन्द राति ग स्तीबाट हरा’एको ख’बर सुनेपछि अत्तालिएका उनकी आमा र श्रीमती उनको ला ‘श भे’टिए यता हो’समा छैनन । परिवारका सदस्यहरु आफै वि’क्षि प्त झै छन् ।
आमा र उनकी श्रीमतीलाई कसरी सम्हाल्ने ? गोविन्दका मामा भरमल सुनाउदै थिए, हाम्रो त सपना र आ शा भरोसा उही भान्जा थियो । उही त’स्करहरुको नि’शा नामा प¥यो । परिवारका सदस्यहरुलाई त यो ख’बर माथि नै विश्वास गरिरहेका छैनन । यो खबर झु टा भ ईदियो हुन्थ्यो, मामा सुनाउदै थिए, नाबालक भान्जालाई मजदुरी गरेर हुर्काएकी दिदी र बुहारीलाई कसरी सम्झाउनु ? भान्जा गोविन्द सिंगो द लित समुदायको एक्लो असई थिए । उसैलाई तस्क रले मा रि दिए । गोविन्दले धनगढीमा डेरा लिएर छोराछोरीलाई पढाईरहेका थिए । उनको ह, ‘त्या’ छि उनका छोराछोरी र श्रीमतीको त बि’चल्ली भएको छ नै, उनको पुरै परिवार नै आर्थिक सं’कटसं’गै नमेटिने पी डा भोग्न बाध्य भएका छन ।
Previous articleलोकदोहोरीमा अर्को इतिहास तोड्दै राजेश हमालले खेलेको मन्जरी भाइरल (भिडियो सहित )
Next articleभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि